Dog Collars Harness Leashes mpanamboatra sy mpamatsy | China Dog Collars Harness Leashes Factory
Ny vozon'akanjo alika lamba azo itarafana dia namboarina niaraka tamin'ny webbing nylon sy harato malefaka sy fofonaina. Mavesatra ity vozon'akanjo ity ary manampy amin'ny fampihenana ny fahasosorana sy ny fikosehana.
Ny vozon'akanjo alika lamba misaintsaina dia natao miaraka amina fitaovam-pandinihana ihany koa.
Ity vozon'akanjo alika lamba mitaratra ity dia manana peratra D avo lenta. Rehefa mivoaka miaraka amin'ny zanakao ianao dia apetaho fotsiny ilay kavina amin'ny peratra vy tsy misy fangarony ary mandehandeha milamina sy milamina.